ရုပ်ထွက်မြင့်မားတဲ့ VR နဲ့ တစ်ခေတ်ဆန်းသစ်စေတော့မယ့် Canon! နောက်ဆုံးမှာ VR က အရှိန်အမြန်ဆုံးနဲ့တိုးတက်လာပြီလား? - JAPO Japanese News
ရုပ်ထွက်မြင့်မားတဲ့ VR နဲ့ တစ်ခေတ်ဆန်းသစ်စေတော့မယ့် Canon! နောက်ဆုံးမှာ VR က အရှိန်အမြန်ဆုံးနဲ့တိုးတက်လာပြီလား?
လာ 01 Nov 2021, 16:05 ညနေ
ဗီဒီယိုလောကမှာ ３D ပုံစံနဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ VR ဟာ စတင်ပေါ်ထွက်ခဲ့လာတဲ့အချိန်ကနေ အခုဆို အချိန်ပေါင်းတော်တော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Youtube မှာလည်း VR နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ တင်နိုင်လာပြီး မျက်စိရှေ့ကမြင်ကွင်းကို 360 ဒီဂရီ ကြည့်ရှုနိုင်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် သိပ်ပြီးလူကြိုက်များမှုမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းကို စာဖတ်သူတို့ သိကြပါသလား?
VR ကို သုံးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုစက်ကို တပ်ဆင်ရပါတယ်။
စက္ကူနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာလည်းရှိပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ အံ့သြစရာကောင်းအောင်လောင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းလည်းရှိပေမယ့် ကြည့်ရှုသူဘက်ကနေလည်း ဒါလေးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကလည်း များများစားစားမရှိဘဲ ရိုက်ကူးသူဘက်မှာလည်း အခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက် ဒီVRစနစ်ဟာ ဒီအတိုင်း ပျောက်သွားမှာလားဆိုပြီး တွေးနေတုန်းမှာပဲ Canon ဘက်ကနေ ရုတ်တရတ် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ထူးဆန်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဒီမှန်ဘီလူးဟာ အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ထောင့်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Fisheye မှန်ဘီလူးနှစ်ခုတွဲထားတဲ့ Monster lens ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာ စတင်ရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ ယန်း ၂၇၅၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိရောင်းချထားတဲ့ကင်မရာကိုယ်ထည်နဲ့ဆို EOS R5 နဲ့ပဲ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလမှာ ရောင်းချဖို့စီစဥ်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် EOS R3 မော်ဒယ်နဲ့တော့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အကြောင်းအရင်းကတော့ 8K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းအတွက်ပဲ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
R5 က လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကတည်းက စတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် pixel ၄၅ သန်း ရှိတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် pixel အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
8K ဗီဒီယိုအတွက် လိုအပ်တဲ့ pixel အရေအတွက်က ၃၅.၄ သန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကင်မရာရှိတဲ့ မှန်ဘီလူးမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
8k ဗီဒီယိုမှာဆိုရင် ဒီလိုဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
8K ဆိုတာ 8192 x 4320px ရှိတဲ့ Resolution ဖြစ်ပါတယ်။
４K အမြင့်၊ အကျယ်ရဲ့ နှစ်ဆလောက်ပိုတိုးသွားတဲ့အတွက် အချက်အလက်ပမာဏက ၄ ဆ လောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။
EOS R5 တစ်ခုပဲ ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ SLR ကင်မရာ နဲ့ ဒါကိုsupport လုပ်နိုင်ပါတယ်။
8K ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက် သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ပမာဏအရွယ်အစားကလည်း လက်ဖျားခါစရာကောင်းလှပါတယ်။
8K နဲ့ အပေါ့ဆုံးဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးရင် 12 မိနစ်တည်းနဲ့ 64 GBရှိတဲ့ memory card ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။
Memory Card သာမကဘဲ ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဖိုင်အတွက်ဆိုရင် PC လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းအစုံအလင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ယန်း2သန်းနီးပါး ကုန်ကျမှာဖြစ်လို့ သာမန်လူအတွက်တော့ လက်လှမ်းမမှီနိုင်ပေမယ့် ပရိုတွေအတွက်တော့ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယန်း2သန်းနဲ့ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး VR ဗီဒီယို Content ကို ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုရင် ယန်း2သန်းက ဘာမှမပြောပလောက်ဘူးလို့ တွေးသူများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် EOS R5 မှာ 8K ရိုက်ကူးရင်5မိနစ်လောက်တည်းနဲ့ Thermal runaway ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် လောလောဆယ်မှာ အဲ့ဒီအချက်ကို စိတ်ပူဖို့လည်းလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာအသစ်တွေကတော့ အစပိုင်းမှာ အခက်အခဲရှိစမြဲပါပဲ။
အဲ့ဒီပြဿနာတွေက အချိန်တစ်ခုကြာတာနဲ့အမျှ အရာအာလုံး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတတ်ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီးတွေက ဒါကို နာမည်ကြီးလူကြိုက်များအောင်လုပ်မလဲဆိုတာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် AV maker တွေလည်း ဒါကို စိတ်ဝင်စားကြပုံပေါ်ပါတယ်။
ကိုယ်က မိန်းကလေးနဲ့ အတူရှိနေတဲ့ခံစားမှုကို ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ရင်ခုန်နေတဲ့အမျိုးသားတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။
ဒါဆို JAPO မှာလည်း ဘယ်လို VR ဗီဒီယိုကို တင်စေချင်ပါသလဲ ? ဘယ်လို VR မျိုးကို ကြည့်ချင်ပါသလဲ?
digital camera နဲ့မိနစ် ၃၀ ကျော် video ရိုက်လို့မရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
Head spa SALON STYLE
ကင်မရာမန်းအလုပ်ကို လုံးဝမရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့! Cannon ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကို မြင်နိုင်တဲ့ အိုလံပစ်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကတ်ထူကုတင်များ !!!
Disney Tsum Tsum Lip Balm